Korea - Travel sy ny Fizahan-tany - Mpisolovava Korea an-tserasera. Koreana Mpisolovava, ny lehibe indrindra ara-dalàna ny vavahadin-tserasera.
Korea - Travel sy ny Fizahan-tany
Araka ny USA Sampan-draharaha ny Varotra, ny fitambaran'ny
Loharano: Korea ny Minisiteran'ny Kolontsaina, ny Fanatanjahan-tena sy ny Fizahan-tany, ny Fizahantany, USA Sampan-draharaha ny Varotra Pirenena Travel ny Fizahan-tany amin'ny BiraoDimy tapitrisa Koreana - mitovitovy ny antsasaky ny mponina no nandeha any ivelany (hatramin'ny valo ambin'ny folo). Fitetezana iraisam-pirenena dia mitombo haingana ny asa ho an'ny Koreana, ary manome fahafahana ho an'ny ETAZONIA ny fizahan-tany fanondranana. Rising fanary fidiram-bola, mitombo tsikelikely ao amin'ny fialan-tsasatra ny fotoana, mainka ny fanatontoloana, ary lehibe ny fampahafantarana ny momba ny fivoaran'ny toe-draharaha any ivelany ny koreana Peninsula no mahatonga bebe kokoa ny Koreana ny mandeha mankany ampitan-dranomasina. Ao Korea per Korea PIB isan'olona nitsangana mba USD, amin'ny taona (Banky iraisam-pirenena), ka mametraka izany ho tsy manana ahiahy ao an-daharana ny afovoany-bola ny firenena.
Koreana mpanjifa fahatokian-tena ihany koa dia mitombo tsikelikely, ao anatin'izany ny fiakaran'ny discretionary fandaniana amin'ny asa natao toy izany dia toy ny mandeha any ivelany ho an'ny raharaham-barotra sy ny fialam-boly.
Tsara ny tondro ara-toekarena, ao Korea koa ny USA Visa Waiver Fandaharana, ary ny USA -Korea Fifanarahana ara-Barotra Malalaka (KORUS FTA), izay niditra tao hery tamin'ny volana Martsa, dia ny fanampiana ny maimaika fotsiny kokoa fialam-boly sy ny raharaham-barotra mifandraika travel any ETAZONIA Amin'izao fotoana izao, sivy koreana aty ETAZONIA dia ho an'ny fandraharahana tanjona. Koreana haino aman-jery no voataonan'ny USA movies, dokam-barotra, kolontsaina malaza, sy ny Internet, izay manohy mandrisika ny tombontsoa in USA travel toerana. Vao haingana boom ny varotra ara-tsosialy (ny tambajotra sosialy sy ny tranonkala izay manome vokatra - ny asa fanompoana mpivarotra ny fidirana lehibe farihy iraisam-pirenena mandeha ny mpanjifa) dia mandray anjara ihany koa ny tsy mitsaha-mitombo izany fironana, rehefa manolotra karazana rehetra travel vokatra. Ankoatra izany, ny Koreana Tatsimo' tsara ny fomba fijery ny any ampitan-dranomasina lavitra ary ho be ny vaovao-ny fizarana izany amin'ny alalan'ny haino aman-jery sy ny haino aman-jery sosialy no antenaina mba hanohy ny tosika ny fitomboana ny mivoaka ny fizahan-tany amin'ny taona ho avy. Ny ETAZONIA dia mbola iray amin'ireo dimy ambony sy ny toerana ho an'ny koreana mivoaka mpandeha. Koreana fetra ny mifidy ny ETAZONIA ho toy ny top tsy Aziatika ela ny fipetrany toerana, voalohany indrindra noho ny isan-karazany ny fizahan-tany fahafahana (tsy amin'ny ankapobeny dia hita any Atsinanana), anisan'izany i ETAZONIA -ny fomba miantsena, tsara fisakafoana, ny foto-kevitra ireo valan-javaboary, ara mahasarika lehibe USA tanàna, somary lafo golf sy ny zavatra niainany ary USA National Parks. tapitrisa Koreana nandeha tany ETAZONIA amin'ny taona, ny roa ambin ny folo isan-jato amin'ny taona mialoha. efa-polo amby sivy tapitrisa ny Koreana dia handeha ho any ETAZONIA Tamin'ny eo ho eo, koreana nitsidika ny USA ny mandany eo ho eo amin'ny USD, sivin-jato isan-diany. Io isa io dia midika hoe ny USD enina arivo tapitrisa isan-taona ny fizahan-tany fidiram-bola avy amin'ny korea mpandeha mivoaka any amin'ny ETAZONIA i Korea dia amin'izao fotoana izao ny fahafito lehibe indrindra ny loharanon ny mampihiditra ny mandeha any ETAZONIA, any Kanada, Meksika, ny United Kingdom, Japan, Shina, ary any Alemaina. Ny USA no mitarika ny tsy Aziatika toerana ho an'ny Koreana tahaka ny tolotra asa isan-karazany, ny toetr'andro, ary ara-kolontsaina ny zavatra niainany. USA -voafatotra Koreana tantara ihany. isan-jato ny ao Korea mivoaka eny an-tsena.
Na izany aza, misy toerana ho an'ny fitomboana
Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, sy Seattle, nanaraka ny New York-Washington, DC lalantsara, dia ny malaza indrindra toerana. Koreana mampiasa ny vondrona tours, na mandeha isam-batan'olona mba hitsidika namana sy ny havana. Vondrona tours tokony hifantoka amin'ny vidiny-mifaninana vokatra fa hitaona fivezivezena ny sampan-draharaha ao Korea mivarotra ireo vokatra. Koreana mpandeha amin'ny ankapobeny liana amin'ny mitsidika ny tranom-bakoka nasionaly ny zaridaina, ny kianja, ny voly ny zaridaina, ny kianja, ny fitadiavana bargains amin'ny lamaody baovao, mividy OTC pharmaceuticals - vitaminina sy ny USA makiazy, milalao golf, sy ny famangiana isan-trano fisakafoanana sy wineries. Hiditra tsena ity, travel and tourism sampana tokony manome fitaovana sy torolalana zavatra niainany tao amin'ny teny koreana, dia mbola mandondòna eo amin'ny varavarana (aho. e, hamangy koreana travel wholesalers), sy hamboly fifandraisana maharitra amin'ny travel ny varotra ao Korea. Misy eo ho eo, ny fitetezam-paritra mpiasa ao Korea.
Fampahafantarana ny vaovao sy ny vokatra fiofanana momba ny fandaharan'asa momba ny USA no ilaina maika ho an'ny fampandrosoana ny tsena.
Contact CS Korea, ny isan-ambany, ho an'ny antsipirihany bebe kokoa. Vonona amin-USA Masoivoho any ivelany Ny tambajotra birao manerana ny Etazonia sy ny any amin'ny tany maherin'ny firenena, ny USA-Barotra Fanompoana ao amin'ny USA Sampan-draharaha ny Varotra mampiasa ny global fanatrehany sy ny iraisam-pirenena barotra fahaizana mba hanampy USA orinasa mivarotra ny vokatra sy ny tolotra maneran-tany. Toerana misy ny USA.